Yakakwira Hunhu Hwevhu Masheya Mugadziri uye Mutengesi | Yanzhao
Mhete yakapatsanurwa pane imwe nguva ndokukotamira muchimiro chehelical. Izvi zvinoita kuti washer ishandise simba rechitubu pakati pemusoro wekusunga neiyo substrate, iyo inochengeta iyo washer yakaoma kupesana neiyo substrate uye bhaudhi shinda yakaoma kurwisa nati kana substrate tambo, ichigadzira kukakavadzana kwakawanda uye kuramba kutenderera. Anoshanda zviyero ndeye ASME B18.21.1, DIN 127 B, uye United States Mauto Standard NASM 35338 (yaimbove MS 35338 uye AN-935).
Masheera echirimo ruoko rwekuruboshwe helix uye anotendera tambo kuti isimbiswe neruoko rwerudyi nzira chete, i.e. Kana ruoko rwekuruboshwe rwuchichinjika rwunoshandiswa, iro rakasimudzwa pamupendero rinoruma mukati mepazasi peiyo bhaudhi kana nzungu uye chikamu icho chakasungirwa kwachiri, nekudaro kuramba kutendeuka. Naizvozvo, machira echirimo haashande pane tambo dzekuruboshwe uye nzvimbo dzakaomarara. Zvakare, hadzifanirwe kushandiswa pamwe chete neyakagezwa washer pasi peiyo tsime washer, sezvo izvi zvinoparadzanisa chitubu washer kubva kuruma muchinhu icho chinoramba kutendeuka.
Iko kubatsirwa kwemashure ekuvharira masheriri kuri mune trapezoidal chimiro cheiyo washer. Kana ichimanikidzwa kutakura padhuze nesimba reuchapupu hwebhaudhi, inozonyongoka uye kupfava. Izvi zvinoderedza chiyero chematsutso chejoinhi yakakwenenzverwa iyo inobvumira kuti ichengetedze simba rakawanda pasi pematanho akafanana ekudengenyeka. Izvi zvinodzivirira kusununguka.
Chitubu washer inodzivirira nzungu nemabhaudhi kutendeuka, kutsvedza uye kubuda zvakasununguka nekuda kwekuzunguzika uye torque. Vakasiyana machira echirimo vanoita basa iri nenzira dzakasiyana zvishoma, asi iyo yakakosha pfungwa kubata nut uye bhaudhi munzvimbo. Mamwe machira echinyakare anozadzisa basa iri nekurumisa mukati mezvinhu zvepasi (bhaudhi) uye nati ine magumo ayo.
Masheera echirimo anowanzo shandiswa mukushandisa kunosanganisira kudengenyeka uye zvinogona kutsvedza zvekusunga. Maindasitiri ayo anowanzo shandisa machira echinyakare ane hukama nezvifambiso (mota, ndege, mugungwa). Masheya echirimo anogona zvakare kushandiswa mumidziyo yemumba yakaita seanobata mweya uye yekuwachisa mbatya (michina yekuwachisa).
Kurema≈kg 0.023 0.053 0.097 0.182 0.406 0.745 1.53 2.82 4.63 6.85
Kurema≈kg 7.75 11 15.2 16.5 26.2 28.2 37.6 51.8 78.7 114
Pashure: Flat Washers
6mm Chitubu Washers
Kaviri Coil Chitubu Washers
Flange Musoro Bolts
Kuzvicheka Screw screws
Din6921 Flange Nuts, Yakakwira Simba Hex Bolts, Nhema Oxidation Hex Bolts, Hexagon Socket Musoro Bolts, Dema Kuputira Hex Bolts, Bolts,